Ahoana ny fampiasana Siri amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fampiasana Siri amin'ny Apple Watch
Jesus Arjona Montalvo | | Apple Watch, Tutorials, maro
Toy ny iPhone, ny Apple Watch dia ahitana ny baikon'ny feo mahery an'i Siri. Mora azo ny mpanampy ny feo ary afaka manao asa isan-karazany amin'ny alàlan'ny feo irery. Mandritra ny lahatsoratra rehetra dia hampianarinay anao ny fomba hampiasana ny Siri, ary ny baiko manan-danja indrindra azonao ampiasaina.
1 Fampahavitrihana Siri
2 Misy ny baiko
Azonao atao mampihetsika Siri amin'ny fomba roaNa amin'ny fampiasana ny feonao na amin'ny alàlan'ny fampiasana ny bokotra ara-batana amin'ny fiambenana. Ny fomba fiasa no mora ampiasaina indrindra, tsy maintsy mamelona ny famantaranandro fotsiny ianao, manangana ny tananao na mikitika ny efijery ary avy eo miteny mazava tsara "Hey Siri".
Raha tsy mametraka fanontaniana ianao dia miandry fotsiny segondra vitsy dia hanontany anao i Siri "Inona no azoko atao?". Ity fomba ity miasa tsara indrindra amin'ny faritra mangina izay tsy afaka manelingelina ny baiko "Hey Siri" ny tabataba any aoriana. Azonao atao koa ny mampavitrika an'i Siri amin'ny fampiasana ny Digital Crown. Toy ny bokotra an-trano amin'ny iPhone dia mila fotsiny ianao tsindrio ary tazomy ny Crown Digital mandra-pahatsapanao hovitrovitra amin'ny famantaranandro na ahitanao onja kely amin'ny faran'ny efijery. Azonao atao ny mamoaka ny Digital Crown ary manontany an'i Siri. Raha mila manatsara ny fikarohana ianao na te hametraka fanontaniana hafa, tsindrio fotsiny dia tazomy indray ny Digital Crown ary lazao ny baikonao. Rehefa vita miaraka amin'i Siri ianao, tsindrio indray ny satroboninahitra hanakatonana ny mpamosavy feo.
Ny fahasamihafana lehibe ananan'i Siri amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny an'ny iPhone na iPad dia ny valiny azonao avy amin'ny mpanampy, aseho amin'ny fiambenana izy ireo, tsy hohenoinao amin'ny iPhone ilay izy.
Misy ny baiko
Misy baiko marobe ho an'i Siri, etsy ambany dia asehonay anao ny tena zava-dehibe sy ny asany:
fanairana - Mampiseho fanairana rehetra, azonao atao ny manitsy sy mamafa azy ireo.
fampahatsiahivana - Mamorona fampahatsiahivana, hamafa na hanova azy ireo.
mijery - Mangataka fampahalalana momba ny daty sy ora - "Amin'ny firy izao any Córdoba?" o "Rahoviana no manomboka ny Paka 2016?"
fameram-potoana - Mametraha fameram-potoana vaovao, asehoy ny timer misy anao, pause, avereno ary atsaharo ny mpamaky fotoana.
Lahatsoratra - Mandefasa hafatra vaovao ary valio ny hafatra.
Kalandrie- Mamorona fivoriana, manontania momba ny hetsika isan'andro sy ny fivoriana ho avy.
telefaonina - Mba hanaovana antso an-tariby.
Fotoana - Anontanio ny toetr'andro, ny toetr'andro manaraka, ary ny fiposahan'ny masoandro / filentehan'ny masoandro - "Inona ny toetr'andro rahampitso?", "Rahoviana no manomboka ny filentehan'ny masoandro any Barcelona anio?", "Mila elo ve aho anio?"
Maps - Makà tari-dalana ary manontania fanontaniana mahaliana eo an-toerana.
mozika - Mampiasà Siri hitendry hira manokana, na lisitra playlist voafantina. Azonao atao koa ny miovaova, miato, na mandingana ny dian-tongotra.
Movies - Mikaroha sarimihetsika, hevitra ary mpilalao sarimihetsika manokana. Azonao atao koa ny mangataka ohatra, "Inona no sarimihetsika tsara indrindra tamin'ny 2013?".
fanatanjahan-tena - Siri dia afaka manome ny naoty farany fanatanjahan-tena, ny fampahafantarana ny fandaharam-potoana, ny laharan'ny ekipa ary ny mombamomba ny mpilalao tsirairay
Misokatra app - Ampiasao Siri hanokatra fampiharana amin'ny Apple Watch.
Misy zavatra sasany tsy vitan'i Siri, toy ny famakiana ny hafatrao farany. Amin'ireny tranga ireny, Hanontany anao hampiasa ny iPhone i Siri hamita ilay asa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fampiasana Siri amin'ny Apple Watch
Mitandrema raha manana tatoazy amin'ny tananao ianao ary te hividy Apple Watch
Mampiasà rantsantanana telo hanehoana ireo topy mason'ny rohy Internet ao amin'ny Safari